सेक्सको बारेमा सोच्ने तरिकामा अहिले केही परिवर्तन आएको छ। सेक्सको बारेमा पाटनरहरुबीच खुलेरै कुराकानी हुन आवश्यक हुन्छ। एक अर्काबीच कुराकानीको माध्यम नभएको बेला जस्तो होइन। अहिले प्रायः प्रविधिका माध्यमबाट सजिलै कुराकानीमा जोडिन सक्छन्। यसले एकअर्काबीच आफ्नो मनमा लागेको कुरा आदानप्रदान गर्न सजिलो हुने गरेको छ।
सेक्सको मामिलामा हाम्रो समाज सोचेभन्दा एक कदम अघि बढिसकेको छ। एक रिसर्चरले भनेको छ कि अहिले पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरु अगाडी देखिन्छन्। पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ कि यो परिवर्तन समाजको एक वर्गमा धरै छ । धेरै देशहरुमा, महिलाहरुलाई आफ्नो मनपर्ने र मन पर्नेको बारेमा धेरै भन्दा धेरै संख्यामा अतीतको तुलनामा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरु पक्कै पुरुषहरूको तुलनामा अगाडि छन्।
रिसर्च के भन्छ ?
विशेषज्ञका अनुसार यस परिवर्तनको लागि धेरै कारणहरु छन्, पहिलो कारण सामाजिक वातावरणमा परिवर्तन भएको देखिन्छ र महिलाहरु लिंग आधारित भूमिका र पहिचानको घेरा तोड्दै छन्।
वर्ष २०११ देखि २०१९ सम्म न्यूयोर्कमा एक अनुसन्धान गरिएको थियो । जहाँ ०१९ मा महिलाहरुले ६५ प्रतिशत आकर्षण पुरुषहरूमा रहेको सुनाएका थिए। २०११ मा यो संख्या ७७ प्रतिशत थियो । ती महिलाहरुले भने कि उनीहरु मात्र पुरुषहरु प्रति आकर्षित हुन्छन्। वर्ष २०११ मा, यो संख्या ८५ प्रतिशत थियो। यति ठूलो फरक कसरी भयो।
त्यो समयको अन्तरालमा पुरुषहरुको यौन व्यवहार र उनीहरुको आकर्षणको केन्द्र अधिक वा कम उस्तै थिए । करिब ८५ प्रतिशत पुरुषहरुले भने कि उनीहरु मात्र महिलाहरूप्रति आकर्षित छन्।
ब्रिटेन र नेदरल्यान्डसहित विश्वभरमा आयोजित सर्वेक्षणको नतीजाहरु लगभग उस्तै भयो। सबै सर्वेक्षणहरुले पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको एक उच्च संख्याले उनीहरुलाई आफ्नो लिङ्गको मानिसहरुलाई आकर्षित गरेको छ भन्ने देखाएको थियो।
बेफाइदा के छ?
इन्टरनेट बालबालिकाको यौन शोषणको माध्यम बनिरहेको छ। यी परिवर्तनहरु महिला र पुरुषहरुलाई फरक फरक असर पारेको छ। यसले पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको भूमिकामा धेरै प्रगति गरेको छ। जसले धेरै मानिसहरुलाई आफ्नो यौन पहिचान र प्राथमिकताहरु व्यक्त गर्न बाध्य बनाइरहेको छ।
एक रिसर्चर एलिजाबेथ मोर्गन भन्छिन्, ‘१५ बर्ष पहिले तपाइँ यस्तो जीवन कल्पना गर्न सक्नुहुन्न जहाँ तपाइँ एक पुरुषसँग विवाह गर्नुहुन्न र घर बनाउनुहुन्न किनकि तपाइँलाई त्यो मानिस चाहिन्छ भनिएको थियो।’
यस्तो स्थितिमा परम्परागत यौन सम्बन्ध भन्दा बाहिर जाँदै महिलाहरुको स्टेरियोटाइप तोड्ने देख्न सकिन्छ, जुन लिङ्गको आधारमा बनाइएको छ। यसबीच, महिलाहरु स्वतन्त्रताको एक ठूलो डिग्री हासिल गर्न सफल भएका छन्, तर पुरुषको भूमिका लगभग उस्तै रह्यो। समाजमा सत्ता अझै उनीहरुको हातमा छ।
एलिजाबेथ मोर्गन भन्छिन्, ‘त्यो जोस् कायम राख्नको लागी, पुरुषहरुले पनि एक पुरूष भूमिका कायम राख्न आवश्यक छ ।’ यस कारणले, महिलाहरुमा समलिङ्गी आकर्षणलाई अधिक सामाजिक मान्यता प्राप्त भएको छ।
यो धेरै धेरै गाह्रो छ मानिसहरुलाई दुई पुरुषको बीच सेक्सको कुरा पचाउनको लागी। वर्ष २०१ क्ष्ल मा २३ देशहरुमा एउटा अध्ययन गरिएको थियो। यो पुरुष र महिलाहरु जो एकै लिंगकोबीच यौन सम्बन्धको व्यवहारमा देखीयो। अध्ययनले खुलाएको छ, “समलिबथ्गी पुरुषहरुलाई मन नपराउने मानिसहरुको संख्या लेस्बियन महिलाहरु भन्दा धेरै थियो।”
समय संगै, त्यहाँ स्थानहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ जहाँ महिलाहरु यौन व्यवहारको बारेमा आफ्नो मनपर्ने र मन नपर्ने बारेमा कुरा गर्न सक्छन्। अमेरिकाको युटा विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञानकी प्राध्यापक लिसा डायमण्डले १९९० को शुरुमा यौन प्रवृत्ति अध्ययन गर्न थालिन्। उनीहरुको अध्ययनमा पुरुषहरुलाई बढी ध्यान दिइएको थियो। उनी भन्छिन् कि अध्ययनमा धेरै सहभागीहरु ’समलैंगिक समर्थन समूहहरु’ बाट आएका थिए र धेरैजसो पुरुषहरु थिए। ’शोधकर्ताहरू पुरुषहरुलाई सजीलो पहुँच थियो।’
तर हीरा महिलाहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्थे। एक दशक भन्दा बढि, उनले १०० महिलाहरुको यौन अभिविन्यास र व्यवहारमा हरेक दुई बर्षमा एक अध्ययन शुरू गरे।
उनले एउटा पुस्तक लेखिन्, “यौन तरलताः महिलाहरुको माया र इच्छा बुझ्ने।’ यो पुस्तक २००८ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यो पुस्तक यो बताउँछ कि कसरी महिलाहरुको प्रेम र आकर्षण समयसंगै बदलिरहन्छ। यो कुरा पुरानो सोच भन्दा फरक थियो। पहिले, यौन अभिविन्यास केहि न केही परिवर्तन हुने भनिएको थियो र हीरा भन्छन् कि यो राय पुरुषहरुको आधारमा निर्णय गरीएको हुन सक्छ।
अमेरिकी सेलिब्रिटीहरु जस्तै सिंथिया निक्सन र मारिया बेलोलो सार्वजनिक रूपबाट महिलाहरुलाई आकर्षित भएको कुरा गरे। त्यो भन्दा पहिले, केवल पुरुषहरुसंग डेट गरेपछि थाहा भएको थियो। ओपरा विनफ्रेले डायमण्डलाई आफ्नो कार्यक्रममा आमन्त्रित गरिन् र महिलाहरुको यौन अभिविन्यासको बारेमा कुरा गर्न भनिन्। मुख्यधाराको बहस आधिकारिक रूपमा यस सम्बन्धमा शुरू भयो।
टर्नि कबथक भन्छन् कि महिलाहरुको यौन पहिचान को लागी छुट्टै भाषा सिक्नु शुरू भयो। उनी भन्छिन् कि उनको लेस्बियन पार्टनर द्दण्ण्ठ मा ’गे स्ट्रेट एलायन्स’ संग जोडिएको थियो जब उनी हाई स्कूल मा थिइन्। यो बाट स्पष्ट छ कि जोडी को बारे मा गठन गरीएको समूह को सदस्यहरु या त अन्य लिंग संग सम्पर्क हुनेछ वा उनीहरु समलैंगिक हुनेछन्। त्यहाँ महिलाहरु बीच सम्बन्ध को लागी कुनै शब्द थिएन।
भविष्यमा के हुनेछ?
अब यो प्रवृत्ति पुरुषहरुको बीचमा प्रवेश गर्नको लागि तयार छ। टिकटकमा रहेका युवाहरु जो विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुन्छन्, उनीहरु भिडियो बनाउँदा आफूलाई समल्गिी भनेर वर्णन गर्छन्। न्यूयोर्क टाइम्सको एउटा लेख अनुसार, उनको महिला अनुयायीहरुको अधिकांश यो मनपर्छ।
फरक कुरा हो कि यी पुरुषहरुलाई भिडियो बनाउनको लागी यो भूमिका खेल्दा सहज लाग्छ वा लाग्दैन, वा उनीहरु यो क्लिक मात्र पाउनको लागी बनाउँछन्, यो थाहा छैन। तर यो प्रवृत्ति देखाउँछ कि पुरुषत्वको बारेमा सोच परिवर्तन हुँदैछ। य बाट यो लाग्छ कि आउँदो युगमा, पुरुषहरुको अधिक संख्या परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिसंग सामेल हुन सक्छ।
महिलाहरु जो यस मामलामा अधिक लचीला हुन्छन् उनीहरु पछि गएर पुरुषहरुलाई बाटो देखाउन मा सहयोगी हुन सक्छन्। धेरै महिलाहरु आफ्नो दृष्टिकोणको बारेमा कुरा गरीरहेछन् कि अब धेरै मानिसहरु निश्चित घेरा बाहिर विकल्पको बारेमा कुरा गरीरहेका छन्।
हीरा भन्छन्, “हाम्रो संस्कृतिले कामुकताको सन्दर्भमा लाजको एउटा ठूलो घेरा बनाएको छ। यसलाई सजिलो र समाजलाई बढी स्वीकार्य बनाउने तरीका हुन सक्छ जसमा मानिसहरु लाज मान्दैनन्।“उनी भन्छिन् कि यस तरीकाले मानिसहरु खुलेआम बाहिर आउन सक्छन्।
“पुरुष हेटेरोसेक्सुअलिटी र परम्परागत पुरुषत्वबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। (तब हामी बिभिन्न वा समान नतिजा (महिलाहरुको बिरुद्ध) विविधताको सन्दर्भमा हुन सक्छौं,“ मेसीले भने।